I-Minecraft Girls Girls Song Band - Iimpawu zokuthengwa kwemakethe yamahhala
I-Minecraft Girls Music Song Band	Ushiye uluvo
Umzekelo weengoma ezidalwa ngokuzenzekelayo usebenzisa ukufundwa komatshini. Iprojekti yethu yenzekelayo yenza umculo wakho kunye yokuzonwabisa esekelwe kwisabelo esifutshane. Kuya kudala fu maneka apha, apho ungazama kwaye usebenzise lobu bugcisa bukhululekile kwaye bungenamkhawulo.
Indie ngumdlalo computer ibekwe kweli hlabathi evulelekileyo apho umdlali inkululeko kukuba intshukumo kunye nomsebenzi. Lo mdlalo okubhaliweyo kwiJava kwaye yaphuhliswa 2009 Swedish developer UMarkus Persson, okwabizwa ngokuba kwenotshi. Kunye nkampani esekelwe umdlalo Mojang, ukuba lo mdlalo sisakhula, nangona e 2014 evela uMarkus Persson uthenge 2,3 yeebhiliyoni ye-Microsoft. lonke ihlabathi Umdlalo yenziwe iityhubhu labamele ezahlukeneyo izinto ngempahla ezahlukahlukeneyo. Lo mdlalo udlalwa lodwa imo player (single umdlali umdlalo) okanye imo edlalwa (zabadlali). Xa sibeka ihlabathi, ungakhetha noba kwindawo othe tyaba okanye ukuphehla random.
← I-Far Cry ye-5 ekhuphayo